Ahịa tiketi Marmaray na njem Marmaray | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulAhịa tiketi Marmaray na Oge njem Marmaray
09 / 11 / 2019 34 Istanbul, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Usoro okporo ígwè uhie (HRS), Isi akụkọ, Turkey, VIDEO
gosiputa map ma gosiputa ndokwa
Ahịa tiketi Marmaray na njem Marmaray: constructionrụ ọrụ Marmaray, nke ga-ejikọ okporo ụzọ dị n'akụkụ abụọ nke Bosphorus, na-aga n'ihu ngwa ngwa. A ga-ejikọ okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ ga-ejikọ onwe ha site na ọdụ ụgbọ oloko n'okpuru Bosphorus. Njem njem Marmaray na mgwọ Marmaray nwere ozi zuru ezu banyere gị. Na Marmaray Zụrụ tiketi tiketi, ị nwere ike ịchọta ọnụahịa tiketi ugbu a.
Marmaray na-abanye n'ime ala dị na Kazlıçeşme; Ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ, Yenikapı na Sirkeci.
A na-eche na ọrụ Marmaray na-emetụta Igodo nke Istanbul na-arụsi ọrụ ike na Bosphorus. Ndị mmadụ ga-ahọrọ iji ụgbọ ala nke ha gafere Bosphorus ngwa ngwa.
Fada Marmaray na Ahịa tiketi tiketi Marmaray
A ga-ekwupụta azịza ajụjụ a n'oge na-adịghị anya tupu ịmalite ọrụ Marmaray. Ọrụ Marmaray nke 29 meghere n'ọnwa Ọkto 2013. Mgbe ị mere nkọwa ọ bụla gbasara awa ọrụ Marmaray, oge ọrụ na oge ije, anyị ga-enye gị oge ọrụ Marmaray:
Mụ na Gebze na Halkalı si Nkeji 105
N'agbata Marmaray na Bostancı na Bakırköy Nkeji 37
N'agbata Marmaray na Söğütlüçeşme na Yenikapı Nkeji 12
N'agbata Marmaray na Üsküdar rue Sirkeci Nkeji 4
A ga-eji nkwụsị Marmaray mee ihe n'otu ụzọ ahụ si Gebze ruo Söğütlü. Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ mmiri na nkwụsị na-emegharị ọhụrụ na ndị na-eji Marmaray Sogutlucesme si Uskudar, mgbe ahụ site n'akụkụ Europe ga-agafe.
O nwere okporo ụzọ metro kasị dị ogologo na Istanbul Halkalı Enwere ngụkọta nkwụsị 42 na eriri Gebze metro. N'ime nkwụsị ndị a, 14 dị n'akụkụ ndị Europe, ebe 28 nke fọdụrụ bụ nọ n'akụkụ ndị Anatolian. Marmaray Stations dị ka ndị a:
Halkalı Mustafakemal Kucukcekmece Florya Yesilkoy Yesilyurt Atakoy Bakirkoy Yenimahalle Zeytinburnu Kazlicesme Yenikapi Sirkeci Bosphorus Uskudar Ibrahimaga Sogutlucesme Feneryolu Goztepe Erenkoy Suadiye Bostanci Kucukyali Idealtepe Sureyya Beach Maltepe Cevizli Anakpa Basak Kartal Yunus Pendik Kaynarca Shipyard Aydıntepe İçmeler Tuzla Cayirova Fatih Osmangazi Gebze
Map na Metro Istanbul nke mmekọrịta
Map nke Marmaray RayHaber Tube
Map Railway Systems Map (pdf)
Ego ole dị obere maka ihe ọmụmụ a ga - adị mma site na 13.03.2019
Ọnụahịa Tiketi zuru ezu: £ 2,60
Ọnụahịa Tiketịpụrụ Ego: 1,25 TL / 1,85 TL
Marmaray ụgwọ ihe nkuzi zuru
Ọnụahịa Tiketi zuru ezu: £ 5,70
Ọnụahịa Tiketịpụrụ Ego: 2,75 TL / 4,0 TL
2019 ugbu a na-agba ọsọ tiketi maka ihe nkiri YHT…
Ankara Istanbul ngwa ngwa ụgbọ oloko na-efu
Ankara Eskişehir High Speed ​​Train Tiketi Ahịa ...
Eskisehir Ankara Ego tiketi ụgbọ elu dị elu na Ahịa…
Ahịa tiketi tiketi dị elu na Konya Ankara…
Ankara Konya High Speed ​​Train Ticket Ahịa fer
Ahịa tiketi ụgbọ elu Konya Istanbul ngwa ngwa
Istanbul Konya High Speed ​​Train Ticket Ahịa fer
Istanbul Eskisehir High Speed ​​Train Tiketi na ve
Oge nhazi oge ụgbọ oloko na-acha anụnụ anụnụ Konya, Ahịa tiketi na…
Mee ndokwa oge